कोइराला क्याविनेटका मन्त्रिीहरुको सम्पती सर्वजनिक; कुन मन्त्री कति धनी ? | Sima Pari
Home / Nepal / कोइराला क्याविनेटका मन्त्रिीहरुको सम्पती सर्वजनिक; कुन मन्त्री कति धनी ?
कोइराला क्याविनेटका मन्त्रिीहरुको सम्पती सर्वजनिक; कुन मन्त्री कति धनी ?
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले आफूसँग कुनै भौतिक र नगद सम्पत्ति नभएको विवरण सरकारलाई बुझाए पनि उनको नेतृत्वमा रहेको मन्त्रीमण्डलमा भने अर्बपति मन्त्री छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले वेबसाइटमा सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा नयाँ मन्त्रीको तुलनामा धेरैपटक मन्त्री भएका धनी देखिएका छन्।
पटक–पटक मन्त्री भएका र महत्वपूर्ण मन्त्रालय हाँकेका कांग्रेस–एमालेका नेताले सम्पत्तिको रूपमा काठमाडौंमा करोडौं पर्ने घर–जग्गा र कैयौं तोला सुन रहेको खुलाएका छन्।सम्पत्तिका नाममा तीनवटा मोबाइल देखाउने प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाका अधिकांश मन्त्रीहरू सुनप्रेमी देखिएका छन् । ‘सर्वहारा’ प्रधानमन्त्रीका मन्त्रीसँग ९५ तोलासम्म सुन छ । २१ जनामध्ये सबैभन्दा धनी अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत सुन जोड्ने मन्त्रीमा पहिलो नम्बरमा परेका छन् । महतले आफूसँग ९५ तोला सुन रहेको जानकारी दिएका छन् । उनीसँग २१ सय तोला चाँदी रहेको छ ।
अर्थमन्त्री महतले सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग केही हीराजवाहरात रहेकोसमेत उल्लेख गरेका छन् । सबैभन्दा महँगो मानिने हीराको यकिन विवरण भने उनले खुलाएका छैनन् । महतले आफूसँग रहेको ठूलो परिमाणको सुन, चाँदी र हीराको स्रोत भने दाइजो, पेवा, विवाह र स्वआर्जनलाई नै उल्लेख गरेका छन् ।
यस्तै उपप्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह पनि सुनप्रेमी नै देखिएका छन् । सिंहसँग ६५ तोला सुन छ । सिंहले पनि आफूसँग केही हीराजवाहरातको गहना भए पनि त्यसको परिमाण खुलाएका छैनन् । सिंहले गहनाको स्रोतका रूपमा पैत्रिक सम्पत्ति र दाइजो नै रहेको उल्लेख गरेका छन् । यस्तै श्रम तथा रोजगार राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरुङ पनि सुनलगायत अन्य सम्पत्तिका कारण निकै धनी मन्त्रीका रूपमा रहेका छन् । गुरुङसँग ७५ तोला सुन छ । यस्तै तीन किलो चाँदी रहेको पनि गुरुङले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा देखाएका छन् । यस्तै गुरुङसँग पाँच लाखबराबरको मुगा पत्थरको गहनासमेत छ ।
यस्तै अर्का सुनप्रेमी मन्त्रीका रूपमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री विमलेन्द्र निधि पनि छन् । निधिसँग ६० तोला सुन र १ सय ५० तोला चाँदी छ । निधिले सुनको स्रोत पेवा र स्वआर्जन भएको बताएका छन् ।
यस्तै वन तथा भू–संरक्षणमन्त्री महेश आचार्यले पनि विवाहमा दाइजोआएको भन्दै ४५ तोला सुन देखाएका छन् । यस्तै कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले पनि आफू र पत्नी शारदा शर्माको गरी ४८ तोला सुन रहेको सम्पत्ति विवरणमा उल्लेख गरेका छन् । शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले पनि सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग ४० तोला सुन रहेको उल्लेख गरेकी छिन् । यस्तै यादवसँग चाँदी चार सय तोला छ ।
सूचना तथा सञ्चारमन्त्री मीनेन्द्र रिजालसँग ४० तोला सुन छ । रिजालले २३ वर्षअघि सुन पैत्रिक सम्पत्तिबाट खरिद गरेको उल्लेख गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री वामदेव गौतमसँग ३५ तोला सुन र सय तोला चाँदी छ । यस्तै उनीसँग एक सेट हीरासमेत रहेको सम्पत्ति विवरणमा देखाइएको छ ।
यस्तै सिँचाइमन्त्री नारायणप्रसाद साउदले पनि ३२ तोला सुन, ७० तोला चाँदी र केही परिमाणमा हीरामोतीसमेत रहेको उल्लेख गरेका छन् । मन्त्री साउदले पनि सुनको स्रोतलाई दाइजो र पैत्रिक दुवै भएको बताएका छन् ।
सहरी विकासमन्त्री नारायण खड्काले आफूले उपहारस्वरूप पाएको भन्दै १८ तोला सुन देखाएका छन् । स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीसँग भने मात्र तीन तोला सुन रहेको छ । यस्तै सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग १० तोला सुन र १० तोला चाँदी छ । भूमिसुधारमन्त्री दलबहादुर रानासँग ११ तोला सुन छ । उद्योगमन्त्री कर्णबहादुर थापासँग १७ तोला सुन र २२० तोला चाँदी छ ।
Previous: ट्वान्टी २० विश्वकप क्रिकेटमा नेपालले अफगानिस्तानलाई ९ रनले हरायो
Next: मेलेसियन एयरलायन्सको जहाजको अवशेष हिन्द महासागरमा देखिएको अष्ट्रेलियन प्रधानमन्त्रीको दाबी